musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Smart Muvhuro kuIMEX America: Kusanganazve kweVakare Shamwari
IMEX America Smart Muvhuro
"Iyi inonzwa senyika itsva yeindasitiri yedu uye zvinondipa tariro yekuti 2022 richava gore rakasimba." Mutengi Valeria Serrano, anobva kuCTA Chiitiko dhizaini uye DMC muMexico, akapfupikisa mufaro uye mafaro akanzwika paIMEX America yepre-show zuva rekudzidza, Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI. “Kwakafanana nokubatanidzwazve kweshamwari dzekare,” akapfuurira kudaro. "Ndiri kushamwaridzana neshamwari dzangu dzeindasitiri uye ndine misangano yakawanda yakarongwa mumazuva mashoma anotevera."
Simba rehupenyu, mumunhu chiitiko chakaita ruzha uye zvakajeka nevazhinji.
Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, yakaitwa neMuvhuro, Mbudzi 8, raive zuva rakatsaurirwa rekutanga-show kudzidza pamberi peIMEX America.
Zuva rakatangwa nemashoko makuru naDr. Shimi Kang, chiremba akahwina mubairo weHarvard, muongorori, uye nyanzvi yezveuropiyo.
Mutengi Donna Rogers, anobva kuSolus Sustainable Hydration muCalifornia, akabvuma, “Ndakatozadza karenda yashefu wangu nemisangano yakatarisana nezviitiko zvemambure!
Simba revapenyu, mumunhu ruzivo rwakaita ruzha uye zvakajeka nevazhinji semutengi anogashirwa Shelby Green, anobva ku Enterprise Events Group muCalifornia, akatsanangura, "Ndiri kufara kuona vanhu zvakare - uye ndinofara kusave pane imwe nhare yevhidhiyo. !”
Makonferensi & zviitiko zvinochengetedza hutano hwevanhu
Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, yakaitwa nemusi weMuvhuro Mbudzi 8, raive zuva rakatsaurirwa rekudzidzira-pre-show kare IMEX America iyo inotanga kubva mangwana kusvika munaNovember 11 kuMandalay Bay, Las Vegas.
Zuva rakatangwa nemashoko makuru naDr. Shimi Kang, chiremba akahwina mubairo weHarvard, muongorori, uye nyanzvi yezveuropiyo. Muchikamu chake, Kufambisa zvinhu zvinopokana: 21st century kushushikana uye hunyanzvi, Shimi akasimbisa manzwisisiro anoita nyanzvi dzezviitiko hukama pakati pezviitiko zvekutarisana uye hutano hwepfungwa achiti: "Imi mose muri nyanzvi dzehutano hwepfungwa - munoziva kuti tinoda misangano, tinoda misangano, tinoda ruzivo. Zvakakosha kuve neizvi sechikamu cheruzivo rwedu rwevanhu - misangano nezviitiko zvinochengetedza hutano hwevanhu. "
Simba rechisikwa rekusimudzira kugara zvakanaka nekuvandudza chiitiko chechiitiko chaive chakatarisana neChimiro chenzvimbo - Iyo ecosystem yekubudirira kwechiitiko. Janet Sperstad, Faculty Director kuMadison College, akanyura zvakadzama mukati make achangobva kuburitswa "Nature of space" IMEX whitepaper. Akapa gwara rekuti angaunze sei zviitiko zvepamoyo izvo "zvinopedza nyota yehukama uye nharaunda." Tsvagiridzo yake inodonongodza nzira dzekugadzirisa zvidzidzo zvakanakisa zvechisikigo kugadzira chiitiko chakabudirira, sekushandiswa kwemwenje, nzvimbo, uye maficha ezvakatipoteredza kukurudzira hunyanzvi.
Nguva dzemwenje - simba rekusimudzira
Nyaya dzezvakatipoteredza dzaive pamberi nepakati peKushanya kweMusangano neMGM Resorts - yakasarudzika kuseri kwezviratidziro mukuedza kukuru kweMandalay Bay. Vatori vechikamu vakaunzwa kune yakakura kwazvo yeAmerica inoenderera pamusoro pedenga resolar array iyo inogara padivi pemamwe matanho-ane hushamwari hwepasi senge marara echikafu uye kuronga marara pa11 yekudzokorodza docks mhiri kwehotera. Basa rakaoma zvikuru? Kuchinja magirobhu kuti ave maLED anobudirira - ose ari 1.4 miriyoni!
MGM's Meeting centric tour yaive chikamu chechirongwa chekushanya chiri kuitika paSmart Muvhuro, ichipa mikana yekubatana kunze kweshow floor. Kushanya kweLip-Smacking Foodie kwakagovanisa zvakadzikira paLas Vegas pamwe chete nezvimwe zvekudya zvakanakisa paStrip, nepo Mystery Trip yakavimbisa manheru akashamisa ezviitiko zvakasiyana, nzvimbo dzinotonhorera, chikafu chinonaka uye kambani huru.
Tekinoroji yechiitiko inokwira zvakanyanya pachirongwa chevazhinji vanoronga misangano uye yakaongororwa muzvirongwa zvinosanganisira ChiitikoMB Chiitiko Innovation Lab™. Iyo yekuronga chiitiko masterclass, yakanangana nevemakambani uye ejensi kuronga, yakapa nzira inoshanda yekuronga, kushambadzira uye kuendesa zviitiko. Chikamu chekudyidzana chakashandisa zvidzidzo uye kuchinjana kwemaitiro akanakisa kugovera zvinyorwa zvitsva zvinoenderana nenyika yakasanganiswa yezviitiko uye tekinoroji-yakapfuma kuronga zviitiko.
Zephia Bryant, mutengi anogarwa kubva kuBryant Educational Leadership Group kuNorth Carolina, akatsanangura chikonzero nei musoro wenyaya wakamunetsa, "Zvizhinji zvezviitiko zvangu zvakafanira kuchinjika kune zvakasanganiswa saka ndiri kutarisa maitiro epamusoro uye maitiro matsva."
IMEX America inovhura mangwana, Chipiri Mbudzi 9, uye inomhanya kusvika Mbudzi 11 kuMandalay Bay, Las Vegas.
Wese munhu anoziva kuti Hushamwari hunoisa hupenyu hwakadzama kupfuura rudo. Nguva nenguva, iwe unosangana neshamwari yekare uye inonzwa sekutsvaga mukati meguruva, rekare redenga remba uye kuwanazve pfuma. Imwe nzira yakanaka yekudzokorora ndangariro ndeyekushanyira nzvimbo dzamakapedza nguva muri pamwe munguva yakapfuura.